Philips SHB9850NC headphone ukubuyekeza - Izindaba Rule
Philips SHB9850NC headphone ukubuyekeza
I Philips SHB9850NCs bayisibonelo esihle ehloniphekile wireless headphones ngomsindo-ukukhansela yehla intengo. Eminyakeni embalwa edlule iqoqo ukusebenza okulingana kuzodingeka izindleko ngokuyenza ngokuphindwe kabili.
Latest Philips Bluetooth wireless headphones ngomsindo-ukukhansela uthole izinto eziningi kwesokudla, kodwa sebehlushwa a niggles ambalwa
Lesi sihloko osesikhundleni “Philips SHB9850NC headphones ukubuyekeza: ngomsindo ekhansela ngaphandle kokuphula ebhange” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesine 18th February 2016 07.00 UTC
zakamuva ngomsindo-ukukhansela Bluetooth headphones Philips sika azame okupakisha izici premium libe isethi engasindi amathini ngaphandle kokuphula ebhange.
Phakathi nawo-range Philips SHB9850NCs kukhona isethi kuqhathaniswa ezicashile kuka-indlebe headphones ukuthi kukhona lifana xaxa ukuze headphones zakudala ukwedlula isizukulwane oversized futhi egqamile-anemibala kickstarted by Beats Apple.
I SHB9850NC headphones bayeke noma ongabeka flat ukusiza uvumelane nabo ngemigodleni. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Icwecwe design izindebe endlebeni kodwa hhayi kakhulu futhi, enamathiselwe band slim kodwa ukhululekile phezulu futhi okuntofontofo kahle endlebeni izinkomishi, okuyinto futhi ugcine izindlebe zakho afudumele zasebusika.
cup Inkonde ngayinye ifakwe umshini yangaphandle ecwebezelayo plastic, okuyinto kuyobonakala amamaki kalula, kubonakale ngiphakamisa imihuzuko ngesikhathi esifushane nje bengilokhu uvivinya kubo.
They phinda ube iphasela elincane, okulula aphonse esikhwameni akunakwenzeka ukuba abanjwe kwezinye ticucu tayo.
Ilungelo isandla indlebe indebe has inkinobho amandla, port headphones kanye nezilawuli touch, ocushiwe ngokuswayipha yonkana Philips logo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Indebe sangakwesokudla indlebe has touch Izilawuli, afana nalawo atholakala kwi Parrot Zik umugqa of headphones. A okukodwa udlala noma ehlaba ikhefu ebukeza umculo, ukuswayiphela phezulu noma phansi ulungisa ivolumu, ngenkathi ukuswayiphela esinxeleni noma kwesokudla imigqomo amathrekhi. Yeqa amathrekhi isebenza kahle, njengoba enza ukulungisa ivolumu ngisho noma kuba kancane slow, kodwa taping noma othinta ukuba uhlabe ikhefu umculo alithembekile, okusho ujwayele bagcina ngokuphindaphindiwe lushaya wena endlebeni yomphakathi - hhayi kutsi batibuke kahle.
Izincwajana zemininingwane izinkinobho zihlanganisa on-off inkinobho, nalowo noma kusebenze nomsindo ekhansela noma switch on imodi amapayipi umsindo isizinda ku earphones ukulalela out for izimemezelo noma ukukhuluma nabantu. Kukhona inkinobho vula i-Bluetooth noma off futhi indinganiso headphones semikhumbi ekulalela kunezintambo.
Yokubhangqa kubo kulula usebenzisa NFC nomunye Thepha ngakwesokhohlo indlebe indebe nge pretty okuningi iyiphi smartphone Android. Abanye ngesandla ukubhanqa ngokubamba phansi inkinobho Bluetooth.
Uxhumano Bluetooth efonini ephaketheni kwaba esitebeleni ngaphandle noma yikuphi ukuphazamiseka kusuka kwamanye amadivayisi, njengomshini SmartWatch noma imfanelo band. I headphones Ungaxhuma kumadivaysi ezimbili ngesikhathi esisodwa, okuyinto Ukugunda uma une isibhebhe smartphone, futhi basekele aptX kanye AAC for ephezulu uxhumo namadivayisi ehambisanayo.
Enye into eyisimanga ngaqaphela kuyinto engasekelwe ndawo ukuthi bangaphazamisa ngezinye izikhathi sime umculo maphakathi ingoma ngaphandle kwesizathu. It kwakuyokwenzekani kanye njalo albhamu engaba mihlanu kuphela, kodwa angikwazanga ukwehlukanisa nayiphi inkinga.
I Ikhansela nomsindo muhle at luvimbe Drone ingemuva, okwenza umsindo kagesi esifana nesika wadala lapho ifoni ephathekayo baxhumana isikhulumi nakakhulu osobala. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The headphones kuzwakale esezingeni elifanele, nge ukulinganisela okuhle ngaphandle bass nalapho kungasadingekile evelele kunazo zonke. Labo ngifuna esiwumvuthwandaba thumps kuyodingeka abheke kwenye indawo. They wakhethelwa zomculo ngabanye kahle, kodwa ngezinye izikhathi kwakuzwakala kancane onodaka in the amabanga maphakathi. Voices on podcasts babengebona njengoba kucacile njengoba ngingathanda ukubuya. Izinga zashintsha kancane ngomsindo ekhansela off, okwenza umculo zizwakala okunomfutho kancane more.
Umsindo ekhansela wawuphumelela at ekuvimbeni out hums ingemuva kanye drones. Kodwa kwakungeyona kuhle ikakhulu ekuvimbeni ezinye imisindo efana voices, futhi ngaphandle kudlala umculo ababeya asiqokomisa.
I bit ecasulayo kakhulu kwaba njalo umkhulungwane kagesi in the background, okwakuyinto ezwakalayo ngokweqile kudlala umculo, kodwa kwaba lapho umculo umiswe noma ngesikhathi izigaba ethule. Kwakubonakala simandla kakhulu uma kukhona umthombo Bluetooth ixhunyiwe futhi lalizwakala umsindo wadala lapho isignali ifoni ephathekayo esiphazamisayo isikhulumi.
The kanzima yinhlama plastic ezansi kwamanetha ihlanganisa isikhulumi ngaphakathi earcup engabangela abanye kukuhlupha. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The headphones kungahlali kahle, bazizwa ukukhanya kodwa uvikelekile ikhanda lakho futhi zikhululekile kulalela enwetshiwe, ngaphandle uma izindlebe zakho eniqhubeka nimkhiphela kancane. Sinenkosi isikwele kanzima plastic ngaphakathi indwangu ukumboza isikhulumi in endlebeni ngayinye cup. izindlebe zami waphumula ngokumelene nabo futhi waba ungakhululekile emva kwesikhashana. Abanye ababezama them on akazange ahlupheke inkinga efanayo, ngakho-ke kuxhomeke kakhulu kangakanani izindlebe zakho eniqhubeka nimkhiphela. Bengingazi ukuthi okwami ​​wanamathela out kude kakhulu, kodwa kusobala angaphezu kuka abanye.
Impilo yebhethri waba ngesikhathi esihle kakhulu, ehlala njalo nxazonke 15 amahora emkhatsini amacala. Kalula impela kangangokuba wakwazi ukuqhubeka kuwufanele sonto of beya Ngomsindo ekhansela on. Ukushaja wathatha isikhathi esingaphezudlwana nje kwehora besebenzisa microUSB echwebeni kufihlwe phezu phezulu headphones ngaphansi ingalo yibhande lasebunzini.
I microsUSB port is efihlekile ngemuva ingalo yokuxhuma earcup kuya yibhande lasebunzini, olubheka kucocekile, kodwa kusho ukuthi awukwazi sizigqoke ngenkathi uqamba sowukhokhiswa. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
I Philips SHB9850NCs ayatholakala for £ 130. Ukuze uqhathanise le Plantronics Backbeat Pro kubiza £ 190 kanye Parrot Zik 2.0 kubiza £ 300. Wired headphones ngomsindo-ukukhansela uqale ngezithuba zawo-£ 100.
I Ikhansela nomsindo muhle, Ukulingana kanye isisindo zinhle kakhulu futhi impilo yebhethri siqinile. Kukhona nje ezimbalwa niggles ukuthi ake ngempela headphones phansi, okungukuthi engabacasuli kakhulu umkhulungwane kagesi, Izilawuli finickity futhi ongaziwa izigaxa kanzima kule izinkomishi endlebeni, okungathi noma angeke kube yinkinga ngawe.
Buhle: ukukhanya, icwecwe, ingemuva enhle hum ukwesulwa, okuqinile ukuxhumana nge- Bluetooth futhi ukuphila kwebhetri
Bawo: ecasulayo umkhulungwane kagesi, izigaxa kanzima earphones, yekwentiwa umsindo atihambi todvwa enye engcono, ilawula hhayi njengoba isabele njengoba kufanele babe
Ukukhanya yibhande lasebunzini futhi luvumelana phezu kwekhanda ngaphandle kokudinga eziningi okokugxusha ukunethezeka. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ezinhlanu best headphones Bluetooth ukuze bagqashule kulo mkhuba samakhebula
Abayisithupha best ngomsindo-ukukhansela headphones ukuthulisa esendleleni
Isigaba, umculo Digital kanye alalelwayo, Gadgets, Ama-headphone, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, Technology
← New Mars Map Okudizayinelwe Humans Regular 14 Times Google Empeleni Wasindisa Ukuphila Omunye [Ranker] →